Family Archives - Page 15 of 49 - Lifestyle Myanmar
ကလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ ရိုက်နှက်မဆုံးမသင့်တဲ့ အရေးကြီး အကြောင်းအရင်း ၄ ချက်
ကလေးသူငယ်တွေအေပါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်ပေးတာဟာ သူတို့ရဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားမှုမရှိပဲ ချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတရားဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တန်းတူညီမျှမှုရှိစွာအကာအကွယ်ပေးထားမှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးတွေကိုကြမ် းတမ်းစွာအပြစ်ပေးခြင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တားဆီးဖို့လိုနေပြီလို့လည်း ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက် သူတွေက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတာဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၅၃နိုင်ငံမှာ တရားမ၀င်ပါဘူး။ ဒီနေ့အထိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၅၃ နိုင်ငံမှာ ကလေးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၅၆ နိုင်ငံကတော့ တားမြစ်ချက်ကိုအပြည့်အ၀ ကတိပြုမယ်လို့ ကတိပြုထားကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ...
တချို့မိဘတွေအတွက်တော့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ နီးလာတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်၊ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးကို မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ သို့သော် မွေးနေ့ပွဲ လုပ်တာ ပိုက်ဆံကုန်တယ်၊ ပင်ပန်းတယ်၊ မလုပ်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ မိဘတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့မှာ ကလေးတွေရဲ့ ပျော်ရွင်တဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် အားပေးပြီး ကလေးငယ်တွေကို မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။ စိတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရဲ့...
တချို့မေမေတွေက အမွှာပူးကလေးတွေအရမ်းလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါက မျိုးရိုးဗီဇနဲ့အခြားသောအခြေအနေတွေပေါ်မူ တည်နေပေမယ့် ကလေးအမွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ မေမေတွေအတွက် အမွှာပူးလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိရင်မွေ းဖွားခြင်း အခွင့်အလမ်းတိုးဖို့ သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာများစွာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာများစွာထဲက သဘာဝနည်းအတိုင်းအမွှာပူးလေး ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. အမွှာတွေဘယ်လိုမွေးဖွားနေလဲ အမွှာလေးတွေဘယ်လိုရနိုင်မလဲ မပြောခင် အမွှာတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လိုမွေးဖွားနေလဲဆိုတာလေး ပြောပြပါမယ်။ 2016 နှစ်သုတေသနတွေအရ အမွှာအစုံ 12,000 ဝန်းကျင်အကြောင်းမှာ သုံးမွှာပူး 190 သို့မဟုတ်...
သားသမီးများ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အောင်မြင်သူ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်(၃)ခု
သားသမီးတွေကို အကောင်းဆုံးဘဝပိုင်ဆိုင်စေချင်ကြတာ မိဘတိုင်းရဲ့ စေတနာတွေပါဘဲ။ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ကြတယ်၊ သင်ယူလေ့လာစေတယ်၊ လမ်းညွှန်ပြသကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ထင်သလို ဖြစ်မလာတွေ ရှိလာကြတဲ့အခါ ဘာကြောင့်လဲလို့ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း Penn State နဲ့ Duke University ကလေ့လာသူများဟာ ကလေးငယ် ၇၀၀ရဲ့ ငယ်ဘဝကနေ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ်ထိ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့အခါ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ ကလေးတွေက သာမာန်ရွယ်တူများထက် ပိုပြီးအောင်မြင်ကြတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ...
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ လက်လှမ်းမီသမျှ ပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း
ဘေဘီလေးတွေဟာ အရာဝတ္တုတွေကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်လာတာနဲ့အမျှ အရာဝတ္တုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရသာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် မြင်မြင်သမျှ သူတို့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒီအလေ့အထကို နို့စို့အရွယ်လေးတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေဟာ အချို့သော reflex (အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်မှု) များနှင့် မွေးဖွားလာပါတယ်။ reflex ဆိုတာ အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ ကြွက်သားတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော အတွေ့အထိတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေက...
ပျင်းရိတဲ့မိဘတွေက ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးကို ဘာကြောင့်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တာလဲ
စူပါမိဘတွေရဲ့ ခေတ်က ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘတွေဟာ ပျင်းရိတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံကို ကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သင့်ကလေးတွေကို တစ်နေကုန်အင်တာနက်ကိုကြည့်ခွင့်ပေးသင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကလေးကို ခဏတာရုန်းကန်ခွင့်ပြုဖို့နှင့် အတားအဆီးအားလုံးကို သူတို့ရဲ့လမ်းကနေ ဖယ်ထုတ်မယ့်အစား စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမယ်ဆိုတာကို လေ့လာဖို့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းခြင်း လှမ်းတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပျင်းရိတဲ့မိဘတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ သည်းခံရတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အားသာချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။ ၁။...
မိဘတွေအားလုံးက မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကို အကောင်းဆုံးဘ၀တွေရရှိစေချင်ကြတယ်။ သူတို့ထဲက တော်တော်များများက သူတို့အတွက်ကစားစရာအသစ်တွေ၀ယ်နိုင်ဖို့ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို စည်းကမ်းလိုက်နာစေချင်တယ်၊ တချို့ကတော့ ကလေးတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင် သင်ပေးတယ်။ မိသားစုတိုင်းက ကိုယ်ပိုင်ပြုစုပျိုးထောင်နည်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက မိဘတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့တူညီချက်တစ်ခုက သူတို့ပြန်လှည့်ချင်တဲ့အတိတ်က အမှားတွေရှိနေတတ်တာပါပဲ။ ၁။ သူတို့ကလေးနှင့်အတူ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကို အပြည့်အ၀မခံစားခဲ့ရဘူး အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာတဲ့ ကလေးတစ်ဦးက လူကြီးတွေနှင့် အမြဲအဆက်အသွယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ့်...
ဒီကနေ့ကာလမှာ ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မတူညီတဲ့အကြံပြုချက်တွေများစွာရှိနေပါတယ်။ မကြာခဏအငြင်းပွားစရာကိစ္စတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာ၀န်တွေနဲ့ စိတ်ပညာရှင်တွေက စမ်းသပ်မှုအသစ်တွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရလဒ်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာအကြံပြုချက်စာရင်းအသစ်တွေလည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အကြံပြုချက်တွေက ထူးဆန်ပုံပေါက်နေပေမယ့်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပိုလေ့းလာလိုက်တဲ့အခါ အတော်လေးအသုံး၀င်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၁။ ကလေးကို ကလိထိုးခြင်း များသောအားဖြင့် လူကြီးတွေဟာကလေးတွေကို ရယ်မောစေလိုကြပြီးတော့ ၎င်းတို့ကို ကလိထိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က...
ကလေးငယ်တွေ ပြောလို့ဆိုလို့ မရနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
စိတ်ပညာရှုထောင့်အရကြည့်ခြင်း ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို အတုယူတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် Marta Segrelles ရဲ့ပြောစကားအရတော့ လူအများစုရဲ့စိတ်သဘောထားတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆီက အမွေဆက်ခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးတွေဟာငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆီက အကျင့်စရိုက်တွေကို တဖြည်းဖြည်းစိမ့်ဝင်လာပြီးတော့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့ မိဘတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို စတင်ကျင့်သုံးစပြုလာပါတော့တယ်။ မိခင် ဒါမှမဟုတ် ဖခင်ရဲ့ စိတ်သဘောထားတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူရဲ့ဘဝတစ်သက်တာလုံးမှာ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းစတာတွေရဲ့...
စောစောစီးစီး စကားပြောတတ်တာကြ ကလေးတွေအတွက် ဘာသာစကာကျွမ်းကျင်မှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ မောင် နှမတွေတောင်စကားပြောဆိုမှုချင်းမတူကြပါဘူး။ တချို့က နောက်ကျတယ်။ တချို့ကစောတယ်၊စကားတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။ သင့်ရဲ့ကလေးကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ စကားပြောဆိုနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေက တိုးတက်လာသင့်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးဆိုရင် "ဒါသားဘောလုံး" တို့ "ကွတ်ကီးတွေပေးပါ"စတဲ့ စကားလုံးအတိုလေးတွေစပြောသင့်ပါပြီ။အသက်၂နှစ်ခွဲလောက်မှာ ကလေးဘာသာ စကားကို သိပ်မကျွမ်းတဲ့လူတွေတောင် သင့်ကလေးစကားရဲ့ ထက်၀က်လောက်ကို နားလည်အောင် ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်၃ နှစ်ဆိုရင်တော့သင့်ကလေးစကားတွေကို လူအများစုအကုန်နားလည်အောင် ပြောနိုင်သင့်ပါပြီနော်.သင့်ကလေးက...
Page 15 of 49 Prev 1 … 14 15 16 … 49 Next